Chikwata chema Warriors
Murairidzi wemaWarriors, Sunday Chidzamwa, akasimuka neChina nevatambi gumi nevasere akananga kuEgypt asi achidarika nekuStephen Keshi Stadium kuNigeria uko Zimbabwe ine mutambo wekuedzana masimba nemaSuper Eagles mangwana.
MaWarriors achasimuka muNigeria neMuvhuro achienda kuEgypt kuri kuitirwa makwikwi eAfcon.
Vasvika kuEgypt, vakomana veZimbabwe vachaedzana masimba nechikwata chekuTanzania, sekutaura kwemutungamiri weZifa, VaFelton Kamambo.
VaKamambo vanoti vanotarisira Zimbabwe kuti ichakwanisa kuenderera mberi kuAfcon.
Chidzambwa atakura vatambi vakaita saKnowledge Musona, Khama Billiart, Marvelous Nakamba, Evans Rusike, Ovidy Karuru, Teenage Hadebe, Marshall Munetsi, Tino Kadewere, George Chigova, Tendai Darikwa, Alec Mudimu, avo vakaita kuti Zimbabwe ive pairi mumutambo weAfcon.
Muongorori wemutambo wenhabvu, VaTawanda Tafirenyika, vanoti vane chivimbo chekuti chikwata ichi chichanoita mashiripiti sezvo vatamba vese kwenguva refu.
Munyori wezvemutambo wenhabvu, Leopold Munhende, vanotiwo vari kuona chikwata ichi chichienderera mberi sezvo vachizivana matambiro avo.
KuAfcon, Zimbabwe iri mugungano rimwechete regroup A ne Egypt, Democratic Republic of Congo neUganda, gungano iro maneja wechikwata ichi, VaWellington Mpandare, vanoti chikwata chavo chinofanira kubudirira.
Zimbabwe haisati yambobuda mugungano rekutanga kubvira muna 2004 apo yakatanga kutamba kumafainari eAfcon zvekuti vamwe vakaona chikwata ichi chichikundikana kumakwikwi eCosafa Cup vanoti vari kuona zvakaoma zvekare ikozvino.
Zvichakadaro, makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenderera mberi kunyange hazvo zvimwe zvikwata zvakaita seHerentals, Yadah, neFC Platinum zviine vatambi vari kuSouth Africa nechikwata chenyika chemaWarriors.
Herentals, iyo ichage isina Richard Hachiro, iri kusangana neCaps United muNational Sports Stadium, Makepekepe aine chinangwa chekudzimura kurohwa kwavakaitwa neChicken Inn svondo rapera.
Kunyange hazvo Herentals ichigarovanetsa makore ese, mumwe muteveri wechikwata chemaGreen Machine, VaHardship Parirewa, vanoti havasi kuvhundutswa nemaStudents aya.
Asi mutambo uri kunyanya kutaurwa nezvawo ndeuyo uri kusangana zvikwata zvemugodhi weplatinum FC Platinum neNgezi Platinum Stars izvo zviri kubandana muBaobab Stadium mangwana.
Mimwe mitambo irko yakamira seizvi:
Yadah v Highlanders
Hwange v Triangle
Dynamos v Manica Diamonds
Mushowani v Bulawayo Chiefs
ZPC Kariva v Chapungu